भाइरसबाट स्मार्टफोनलाई कसरी बचाउने ? - Myagdi Online
भाइरसबाट स्मार्टफोनलाई कसरी बचाउने ?
कम्प्युटर होस् या स्मार्टफोन तिनको प्रविधि उस्तै–उस्तै हुने भएकाले जुनसुकै बेला भाइरसले सताउन सक्छ । हरेक वर्ष निर्माता कम्पनीहरुले कम्प्युटर, ट्याब्लेट, फ्याब्लेट वा स्मार्टफोनलाई भाइरस प्रतिरोधी बनाउँने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । तर, कम्पनीको यो प्रयासलाई विफल पार्ने समूह पनि उत्तिकै सक्रिय हुन्छ । जसले भाइरस फैलाउने काम गर्छ । तपाईको स्मार्टफोन पनि जुनसुकै बेला भाइरसबाट प्रभावित हुनसक्छ । त्यसले तपाईको फोनको कार्यक्षमतालाई सुस्त बनाउने मात्र होइन, महत्वपूर्ण सूचना र व्यक्तिगत विवरण समेत चोरी हुनसक्छ ।
आफ्ना उपकरणमा भाइरस लाग्न नदिनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ । लागिहालेपनि त्यसलाई तत्कालै हटाउने विभिन्न उपाय गर्नुपर्छ । यसो गरिएन भने हाम्रा उपकरणबाट महत्वपूर्ण अभिलेख बिग्रने वा हराउने समेत हुनसक्छ ।
भाइरस कहाँबाट आउँछ ?
कम्प्युटरमा जस्तै तपाईको स्मार्टफोनमा पनि अन्य उपकरण वा इन्टरनेटको माध्यमबाट भाइरस आउनसक्छ । अहिले स्मार्टफोनमा प्रायः सबैले इन्टरनेट चलाउने गर्छन् । सामाजिक सञ्जाल चलाउने माध्यम पनि स्मार्टफोन नै भएको छ । त्यसले गर्दा सबैभन्दा धेरै भाइरस आउने सम्भावना इन्टरनेटबाटै हुन्छ । तपाईले कुनैपनि गेम, एप्स वा डाटा नै डाउनलोड गर्दा पनि भाइरस आउन सक्छ । यसका अतिरिक्त तपाईले ब्लुटुट वा ‘सेयरइट’लगायतबाट अन्य उपकरणमा भएको डाटा सार्दा पनि भाइरस आउन सक्छ । अर्को उपकरणमा भाइरस भएको अवस्थामा मात्र यस्तो सम्भावना धेरै हुन्छ ।
भाइरसबाट कसरी बचाउँने ?
भाइसरबाट आफ्नो स्मार्टफोनलाई बाचाउन सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको शंकास्पद वेवसाइट नखोल्नु र जुनसुकै एप्स डाउनलोड नगर्नु नै हो । कतिपयको पोर्न साइट हेर्ने बानी हुन्छ । यस्ता साइटबाट सबैभन्दा छिटो भाइरस स्मार्टफोनमा पस्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो स्वचालितरुपमा जुनसुकै एप्स डाउनलोड र इन्टल हुने बनाउनु भएको छ भने पनि तपाईको स्मार्टफोनमा भाइरस पस्न सक्छ ।
भाइरसबाट जोगाउन स्मार्टफोन किनेपछि सबैभन्दा पहिले गतिलो एन्टिभाइरस हाल्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि कुन एन्टिभाइरस राम्रो भन्ने विभिन्न वेवसाइटमा गएर तिनको ‘रिभ्यु’ पढेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । वाइफाई प्रयोग गर्दा र आफ्नो मोबाइलबाट वाइफाई ‘हट्सपट’ बनाउँदा पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
भाइरस लागिहालेको खण्डमा तपाईको डाटाको सुरक्षका लागि पहिले नै सबैखाले डाटाहरु ‘ब्याकअप’ राख्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘ब्याकअप’का लागि तपाई हार्डड्राइभ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तै अहिले धेरै खाले ‘क्लाउड बेस’ सुविधा आएकाले त्यसमा पनि डाटालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ । फोनमा पासवर्ड राखेपनि धेरैले एप्सका लागि भने छुट्टै पासवर्ड राखेका हुदैनन् । सुरक्षाका हिसाबले हरेक एप्सका लागि पासवर्ड राख्नु उपयुक्त मानिन्छ । फोन प्रयोग नगरेका बेला सबैलाखे सेवाहरु (इन्टरनेट, जिपिएसलगायत) बन्द गर्नु सबैभन्दा राम्रो हो ।
क्यान म्याग्दीको अध्यक्षमा रिजाल चयन 1 महिना, 16 दिन अगाडि
गाउँका पत्रकार ‘ दल प्रसाद तिलिजा’4महिना अगाडि
म्याग्दीका विद्यार्थीले डोजर बनाए (भिडियो सहित)4महिना, 23 दिन अगाडि
थप आठ विद्यालयमा विद्युतीय पुस्तकालय जडान5महिना, 15 दिन अगाडि
पत्रकारसंग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्वन्धि अन्तक्रिया5महिना, 17 दिन अगाडि
नागीबाट औषधि बोकेर उड्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रकाे मेडिकल ड्रोन6महिना,9दिन अगाडि
धौलागिरीमा वेभसर्वरको सेवा विस्तार6महिना, 14 दिन अगाडि
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले निर्माण गर्ने ‘मेडिकल ड्रोन’ म्याग्दीबाट परिक्षण गरिने6महिना, 24 दिन अगाडि
बाबियाचौरमा मोवाईल सेवा विस्तार7महिना, 27 दिन अगाडि